axle ai Gear သည် Mac Mini-based Video Powerhouse ဖြစ်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ရိုး ai ဂီယာတစ်ဦး, Mac Mini-based ဗီဒီယို Powerhouse ဖြစ်ပါသည်
ရိုး ai ဂီယာတစ်ဦး, Mac Mini-based ဗီဒီယို Powerhouse ဖြစ်ပါသည်
အပြီးအစီးစနစ်က AI အ-based မှတ်သားခြင်း, ရှာ, transcoding နှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာအလိုအလျောက်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု streamlines ။
ဘော်စတွန် - နှစ်လယ်ပိုင်းအရွယ်အသင်းများကိုမှသေးငယ်တဲ့အဘို့အဆင့်မြင့်သည်ဗီဒီယိုစီမံခန့်ခွဲမှု tools တွေကိုများအတွက်အကြီးအကျယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်လိုအပ်ချက်ဖြေရှင်းရန်ဆက်လက်, ရိုး ai, Inc ရိုး ai ဂီယာ™, ရိုး ai ရဲ့နဲ့အတူပါဝါကွန်ပျူတာသစ်ကို Apple က Mac အတွက် mini ကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဘက်ပေါင်းစုံစနစ်၏ပစ်လွှတ်ကိုကြေညာ ဘရောက်ဇာကို-based, AI အ-နိုင်စွမ်းမီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှု, workflow နှင့် transcode ဆော့ဖ်ဝဲ။ ကုမ္ပဏီ၏ '' အကြီးအကျယ်ရိုးရှင်းသော '' ဒဿနမှစစ်မှန်သော, ရိုး ai ဂီယာ State-Of-အနုပညာ Auto-Tagging ပေါင်းစပ်နှင့်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသော graphical workflow နှင့် transcoding tools များနှင့်အတူရှာဖွေ။
Apple ရဲ့အသစ်က Mac အတွက် mini ကိုယခုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 500 ဖန်တီးမှုက်ဘ်ဆိုက်များကိုကျော်ရေ, ဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်း ai အဖြစ်သောင်းချီသောဗီဒီယိုရှာဖွေရေးနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာ tools တွေကိုရှာဖွေနေစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကဗီဒီယိုအဖွဲ့များထောင်ပေါင်းများစွာ၏၏ဝင်ရိုးတစ်ခုအောင်မြင်မှုများကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ရိုးက်ဘ်ဆိုက်များထင်ရှားတဲ့ထုတ်လွှင့်, post ကိုအိမ်များ, အားကစားကွင်းများနှင့်အဖွဲ့များ, တက္ကသိုလ်များ, ကော်ပိုရိတ်ကိုဗီဒီယိုဌာနများနှင့်ဝတ်ပြုမှုအိမ်များပါဝင်သည် ai ။ တစ်ဦးက Bleacher အစီရင်ခံစာ၏မကြာသေးမီပရိုဖိုင်းကို ရိုး run ဖို့ပိုပြီးအစွမ်းထက်, Mac Pro ကိုနှင့် Linux စနစ်များတွင် အသုံးပြု. ပိုကြီးတဲ့ site ကိုဖြေရှင်းချက် ai အဖမ်းခံရသောလူအရေအတွက်။
အမြားအပွားကိစ္စများတွင်ဤဖောက်သည်မီဒီယာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များသည်၎င်းတို့၏ network သိုလှောင်မှုမှသူတို့ကိုဆက်သွယ်, ရိုး ai software ကို run ဖို့, Mac Pro ကိုစနစ်များကိုဝယ်ယူသို့မဟုတ် repurposed ပါပြီ။ ရိုး ai ဂီယာတစ်ယောက်တည်းဟာ့ဒ်ဝဲသိပ်သည်းထုတ်ပိုးခြင်းနှင့်နိမ့်ပါဝါစားသုံးမှု၏ဆက်ပြောသည်အကျိုးကျေးဇူးများကိုအတူကုန်ကျရန်အသုံးပြုသောအရာကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစျေးနှုန်းတစ်ဦးပြည့်စုံဆော့ဖျဝဲ / ဟာ့ဒ်ဝဲဖြေရှင်းချက်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, ဈေးကွက်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတန်ဖိုးအသစ်ကိုယ်စားပြုတယ်။
အဆိုပါစနစ်၏ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအရွယ်အစားလည်းဝင်ရိုး၏လယ်ပြင်များထားရှိဆော့ဖ်ဝဲကိုဗီဒီယိုဖမ်းမိသည်အဘယ်မှာရှိယခု-set ကို DIT (ဒီဂျစ်တယ်အလယ်အလတ်နည်းပညာရှင်) အပါအဝင်တစ်ဦးလေပြေ, ညာဘက်ကိုအသုံးပြုနေကြပါတယ်။ ai ဆိုလိုသည် တစ်ဦးက ဒီလုပ်ငန်းအသွားအလာ၏ကြီးမြတ်ဥပမာ ဖမ်းယူခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲ Kenny Chesney ရဲ့ခရီးစဉ်များအတွက်ဗီဒီယိုနှင့်ရလဒ် tag နဲ့ရှာဖွေရိုး ai ဆော့ဖျဝဲကိုအသုံးပြုတဲ့သူဂျေး Cooper ကဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါစနစ်များကိုအသီးအသီး 3.2GHz 6-Core တပ်ဆင်ထား Apple ရဲ့အစွမ်းထက်သစ်ကို Apple Mac Mini ကိုတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုထည့်သွင်း Intel က i7 CPU များ, upgrade လုပ်လို့ရပါပြီ RAM ကို 16GB, ပြင်ပ hard disk ကိုသိုလှောင်မှု SSD ကိုနှင့် 256 terabytes ၏ 4GB အဖြစ်တစ်ဦး 10 Gigabit Ethernet ကွန်ယက်ကို port ကို။
အဆိုပါအခြေစိုက်စခန်း configuration များ, ရိုး ai ဂီယာ 1, တစ်ခုတည်းနဲ့ Mac mini ကိုပြေးပါဝင်သည်:
ရိုးတစ် 2018 အသုံးပြုသူလိုင်စင်နှင့်အတူ2AI အ-နိုင်စွမ်း, browser ကို-based မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲကို ai
ရိုး ai ရဲ့အသစ် connectr လုပ်ငန်းအသွားအလာအလိုအလျောက် software ကို
Apple ရဲ့ Mac OS နဲ့ US မှာရှိတဲ့ Mojave operating system ကို
အသုံးပြုသူများသည်မည်သည့်ခေတ်သစ်ကို web browser ကနေစနစ်အတွက် log နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါစနစ်က Windows PC များ, Macs, iPad, iPhone နှင့် browser ကို client များအဖြစ် Android ထုတ်ကုန်ထောက်ခံပါတယ်။
အဆိုပါပိုကြီးတဲ့ configuration များ, ရိုးဂီယာ 2, 2, Mac Mini တို့ပါဝင်သည် - တဦးတည်းပြေး:
R3D နှင့် ARRI အထောက်အပံ့အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြား 4K ပုံစံများနှင့်အတူရိုး ai ရဲ့အဆင့်မြင့် Transcode module တစ်ခု
နှင့်ဒုတိယ, Mac mini ကိုအပြေး:
ရိုးဂီယာ configurations SAN, NAS, အရာဝတ္ထု / မိုဃ်းတိမ်သည်နှင့် LTO တိပ်နည်းပညာများအပါအဝင်နီးပါးမဆိုကွန်ယက်သိုလှောင်မှုနဲ့အတူသဟဇာတဖြစ်ကြ ai ။
ရိုး ai ဂီယာ 1 $ 5,995 ထံမှစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ရိုး ai ဂီယာ2$ 9,995 ထံမှစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ အကွိမျမြားစှာရှေးခယျြစရာစနစ်များကို '' I / O နှင့်၎င်းတို့၏အလုပ်လုပ်သိုလှောင်မှုနှစ်ဦးစလုံးကိုချဲ့ထွင်ရန်ရိုး ai နှင့်၎င်း၏ပြန်လည်ရောင်းချသူများအနေဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ရိုး ai ဂီယာအားလုံးဟာ့ဒ်ဝဲအပေါ်တစ်ဦးတစ်နှစ်အာမခံနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါင်းတို့နှင့် software ကိုအပေါ် updates များကိုတစ်ဦးတည်းနှစ်စာချုပ်နှင့်အတူကြွလာ။
NABshow တိုက်ရိုက်အပေါ်ရိုး ai ရဲ့ဆမ် Bogoch ကြည့်ဖို့ကဒီမှာကလစ်နှိပ်ပါ။
ရိုး ai အခြေခံကျကျရိုးရိုး video ရှာဖွေရေးနှင့်အတုထောက်လှမ်းရေးနှင့်စက်သင်ယူမှုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအပြည့်အဝအားသာချက်ယူစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်ရှေ့ဆောင်သည်။ လူမှုရေးမီဒီယာကဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းနှင့် postproduction အတွက်ကြီးမားသောဖွံ့ဖြိုးမှုကိုမောင်းအဖြစ်, ရိုးတစ်လန်းလာသောလိုအပ်ချက်အမှာစကားနှင့် postproduction, ပညာရေး, ထုတ်လွှင့်, ကော်ပိုရိတ်, အားကစား, ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်ကို non-profit, advertising- ဗီဒီယိုပညာရှင်များအကြားလျှင်မြန်စွာအပေါ်ဖမ်းမိထားပြီးထူးခြား ai စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ။ ယင်း၏နိဒါန်းမှာ, ရိုးဆော့ဝဲဂုဏ်သိက္ခာ DV မဂ္ဂဇင်းက Black စိန်နှင့် Post ကိုဆု Picks အတူ IBC 2012 အကောင်းဆုံးပြရန်၏ဆုနှင့် NAB 2013 မှာအသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။ ရိုး ai ဘော်စတွန်အခြေစိုက်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကျင်းပကုမ္ပဏီဖြစ်၏ ယင်း၏တည်ထောင်သူဖန်တီးမှု application များအတွက်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ကျယ်ပြန့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကိုရှိသည်။ မှာပိုမိုလေ့လာသင်ယူ www.axle.ai.
ရိုး ai ငလျင်ကြောင့်မြို့တော်ထဲကနေရန်ပုံငွေကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီး SeedInvest, ဦးဆောင်ပေမယ့ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ရန်ပုံငွေပတ်ပတ်လည်စတင်နေပါတယ်။ မှာနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ www.seedinvest.com/axle.ai.
AI ဉာဏ်ရည်တု ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှု nabshow အသစ်က productts SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2018-10-31
ယခင်: တန်းတူရေး, ဂရိတ်, Movies ကဲ့သို့ပင်အသေးစိတ်အားလုံးမှအာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်သည်
နောက်တစ်ခု: မြက်ချိုင့်နှင့် Gearhouse အကူအညီသြစတြေးလျ၏ပထမဦးဆုံး 4K UHD တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုနှင့်အတူသမိုင်း Make